Fivahinianana iray ho an’ny feon’ireo tsy mba re amin’ny fananganana indray an’i Haiti · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Oktobra 2010 8:23 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, Italiano
Giordano Cossu avy any Italie sy Benoit Cassegrain avy any France dia samy « web reporters » namorona ny Solidar'IT any Haiti, tetikasa anaty tranonkala niforona tamin’ny alalan’ny fikasana hanao ny Paris Crisis Camp mba hampiasana aterineto sy ireo teknolojia hafa hanampiana ireo Haitiana niharan’ny horohoron-tany tamin’ny volana Janoary lasa teo .
Amin’ny maha tetikasa “multimedia” tsy fitadiavam-bola azy, Solidar'IT in Haiti dia fitantarana amin’ny alalan’ireo feo tsy mba re mikasika ny fanarenana ao Haiti sy fanadihadiana ny tena zava-misy tao aorian’ny horohorontany iny amin’ny alalan’ny fampisongadinana ireo mponina eny an-toerana izay betsaka no voahilika amin’ny rafitra fanarenana sy mbola miaina ao anaty krizy.
Araka ny resadresaka natao tamin’i Giordano Cossu tamin’ny alalan’ny Skype, dia nanazava izy fa efa nisy roa volana izao no niainany tany Haiti niaraka tamin’i Cassegrain ka nandritra izay fotoana izay no nanantontosana ny fanadihadiana tamin’ny firesahana ny fakana sary ireo mponina.
“Betsaka ny mihevitra ho voambaka, na eo amin’ireo mponina izay miaina ao anaty lay gaoka eny anivon’ny toby na koa eo amin’ireo mpilatsaka an-tsitrapo sy ireo fikambanana miezaka manampy sy mitady vahaolana. Ny tetikay dia ny hampivoitra ireo feo tsy mba re ireo, mba tsy avy amin’ireo fikambanana tsy miankina amin’ny fanjakana miasa aty Haiti ihany ny 95 isan-jaton’ny vaovao mivoaka, izay hita fa miaro ny tombotsoany ihany koa.”
Tobin'ny mpitsoa-ponenana ao Haiti (saryu avy amin'ny SolidarIT ao Haiti, eo ambany fiarovan'ny CC)
Mandra-pahavitan’ilay fanadihadiana an-tranonkala amin’ny faran’ny taona, ity tranonkala multimedia ity no hahitana ireo karazana multimedia amin’ny teny anglisy sy teny frantsay :
Ity bilaogy multimedia-nay ity dia làlana iray hampisehoana ny fizotran’ny asa ataonay ary hahafahan’ny olona manaraka mivantana an’ireo fijoroana ho vavolombelona manan-danja efa voahangona hatramin’izay.
Nanapa-kevitra izahay ny tsy hanome afa-tsy ny savaranonando miaraka amin’ny sombin-tsary manan-danja eo amin’ny sary sy feo. Vao mihaino sy mijery ireo sary fotsiny ny olona dia afaka mahatsapa avy hatrany ny tena zava-misy any Haiti – Mahaliana kokoa noho ny mamaky gazety.!
Ny mpitsidika ao amin’ilay fanadihadiana an-tranonkala no mandahatra ireo horonantsary araka izay itiavany azy, ary vao roa taona monja izao no nampiharana io fomba io.
Tsy nifandraika amin’ny maha olona ny fomba fiaina any amin’ireo toby amin’izao fotoana izao ka vao maika miteraka olana indraindray eo amin’ireo zaza amam-behivavy ary ireo olona marary, izay voasokajy ho marefo.
Talohan’ny horohorontany, ny herisetra atao amin’ny vehivavy dia efa nametraka olana, nefa taorian'izany dia vao maika mihanaka ny olana, na dia minia manamaivana izany aza ireo andrim-panjakana any an-toerana : tsy misy jiro any amin’ireo toby rehefa alina ary mazàna dia mitambatra fitoerana fandroana ny lahy sy ny vavy, izay miteraka tahotra sy mampitombo ny fahatsapan’izy ireo ny tsy fandriam-pahalemana.
Hazavain’i Solidar'IT in Haiti amin’ny alalan’ny sary sy feo ny fomba fiatrehan’ny fikambanan’ny vehivavy any an-toerana ny olana mitranga :
Apetrak’ireo vehivavy tsy mitonona anarana ao anaty vata antsoina hoe “ vatan’ny fangirifiriana “, ny taratasy nosoratan’izy ireo mitantara ny herisetra sy fanararaotana nihatra tamin’izy ireo : manomboka amin’ny tsy fanomezana sakafo hatramin’ny fanolanana nataon’ny fianakaviany. Sokafana isaky ny herinandro io vata io ary vakiana ampahibe-maso ireo taratasy ireo, izay mafy zakaina nefa ilaina ny fotoana toy izany satria miasa toy ny fanafody—ary mampitombo ny fahafantaran’izy ireo ny zo-ny.
25 taona izao i Marie Sofonie ary vonona hamaky ny fahanginana mikasika ireo fanararaotana. Mpandray anjara mavitrika amin’ny tetikasa AYITI SMS SOS izy ; izay mamela ireo niharan’ny fanararaotana handefa SMS mankany amin’ny laharana maitso (38030303). Hita eo amin’ny sarintany ny niavin’ny antso ary voatsinjara araka ny karazana heloka na fiantsoana vonjy, toerana, sns- amin’ny alalan’ny fampiasana rindrankajy Ushahidi sy Frontline SMS. Ny AYITI SMS SOS dia tohanan’ny Survu Connect, fikambanana mifandray akaiky amin’ny Fondation Espoir
Misahana ny famakiana sy fitsinjarana ireo SMS i Marie Sofonie (efa misy anarivony sahady) ary mandray anjara amin’ny bilaogin’ny SOLIDAR’IT : izany no fomba hanehoany maneran-tany ny feony.
Ralph dia tanora haitianina mpanao gazety ao amin’ny “ a camp per day”, fandaharana amin’ny onjam-peo izay maharitra 20 minitra ary mitondra ny anarana hoe ENDK (“Enfomasyon nou dwe konnen”, midika hoe “vaovao ilaina”), vokarin’ny fikambanana tsy miankina amin’ny fanjakana Internews. Mandeha mitety ireo toby izy isan’andro, ary miresaka amin’ireo olona mba hahafahana mamantatra ny tena olana goavana sedrain’izy ireo. Ny tatitra ataony dia maneho avy hatrany ny zavatra tsapa sy hita ary koa ny filàn’ireo olona miaina ao anaty toby, ary hahazoana vaovao any amin’ireo toby hafa. ENDK dia fandaharana isan’andro alefa amin’ny tambajotra-na onjam-peo miisa 35 any Haiti. Ny tantaran’i Ralph dia feo hafa nalaina ary nalefa eo amin’ny tranonkala amin’ny alalan’i SOLIDAR’IT ao amin’ny Haiti Documentary.
Misy tantara hafa koa ao anatin’ny tetikasa-na tranokala toy ny mikasika ny Onjam-peo Boukman, fikambanan’ny onjam-peo ao Cité Soleil, fokontany mampitahotra ao Port-au-Prince, izay mandrindra ny fampandrenesana mikasika ny rivodoza izay tsy misy fanohanana iraisam-pirenena. Ary misy koa ny The Koute Ayiti (Listen to Haiti) caravan noforonina hitety ireo faritany voakasiky ny horohoron-tany ary vaovao mikasika ny fahasalamana sy vaovao iankinan’ny aina mba ho enti-manohana ny fanarenana.
Onjam-peo Boukman, feon’ny ireo tsy mahazo miteny ao Cité Soleil : avy amin'ny Web-Reporter ao amin'ny Vimeo.
Mahatratra 1,5 tapitrisa ireo olona mbola miaina ao anaty lay kanefa mbola tsy manomboka foana ny asa fanarenana hatramin’izao. Manerana ny làlana sy ny toby fialofana dia ahitàna ankizy tsy ampy sakafo marobe, mora fantatra noho ny volon’izy ireo lasa loko volom-boasary. Nampanantena fanampiana mihoatra ny lavitrisa dolara ny amerikanina, nefa hatramin’izao dia mbola tsy mivoaka foana io vola io, fanampiana mbola tsy nisy nahita tao Haiti.
Hatramin’ny volana Aogositra, ny hany fanampiana azo dia ireo avy any Norvege, Estonie, Australie ary Bresil. Tsy afaka mipetraka anaty lay ireo olona raha tsy izy ireo ihany no mamoaka vola am-paosy hividianana an’izany.
Betsaka ireo Haitiana mahatsiaro voahilik’ireo fikambanana tsy miankina amin’ny fanjakana mpandrindra ny toby fialofana, izay zara raha manome vaovao azy ireo, na koa ilay fiandrasana 18-24 volana vao mety mahazo trano itoerana ao amin’ny faritra fandalovan’ny rivodoza. Ary raha toa ka mbola tsy misy ny governemanta mitsangana dia ny fiarahamonim-pirenena no miezaka mandray andraikitra. Ohatra iray : Toby fialofana 60 (amina totalin’isa 460 ao Port-au-Prince fotsiny) sahanin’ny fikambanan’ny tanora tsy miankina FNJD , amin’ny fizarana ny kely izay ananany.
Ny tapany faharoa amin’ity fanadihadiana an-tranonkala ity dia antenaina ho vita amin’ny volana novambra, rehefa miverina indray any Haiti i Giordano Cossu sy Benoit Cassegrain mba hanadihady lalindalina kokoa mikasika ny fizotran’ny fanorenana, hanao tafatafa fohy sy fanatonana mivantana miaraka sy mikasika ireo mponina any an-toerana.
Raha te-hahafantatra misimisy kokoa mikasika ny tetikasa Solidar'IT in Haiti dia afaka mitsidika ny tranonkala /bilaogy, takelaka Facebook na fahana Twitter. Raha hanome fanampiana avy hatrany, afaka mampiasa ny Ulule, sehatry ho fanangonam-bola.